करिश्माको अफेयर थाहा पाएपछि सलोनको छुट्यो पसिना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। सलोन बस्नेत तथा करिष्मा श्रेष्ठ स्टारर फिल्म आज देखि प्रदर्शनमा आएको छ । रियल प्रेमी/प्रेमिका सलोन र करिष्माको मुख्य अभिनय रहेको यो फिल्मलाई सलोनकै पिता शोभित बस्नेतले निर्माण तथा निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै निर्देशक शोभित बस्नेतदेखि सलोन र करिष्मा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिनमै व्यस्त छन् । कतिपयले तीन जनालाई छोरा बुहारी र ससुरा भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छन् ।